गृहपृष्ठ मुख्य समाचार कांग्रेसमा कञ्चनपुर जिल्लाभर नगर सभापतिका लागि को–को भिड्दै ! (सूचि सहित)
महेन्द्रनगर । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर ९ देखि १३ गतेसम्म गर्ने मिति तय भए संगै अधिकांश जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । २७ भदौमा नेपाली कांग्रेसले नगर अधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ । १८ भदौमा कञ्चनपुरमा भएको वडा अधिवेशनमा ९२ मध्ये ७२ वडा कार्यसमिति र क्षेत्रिय प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन भएका हुन भने, २० वडामा मात्रै चुनावी प्रतिशर्पधा भएको थियो ।
२७ भदैमा हुँने नगर अधिवेशनमा कञ्चनपुरका नौं वटै स्थानीय तहमा नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुँने स्थिती देखिएको छ । नगर कार्यसमितिमा एकथरी युवा पुस्ताका नेताहरु नेतृत्व दाबि गर्दैछन भने, अर्काथरी अग्रज नेता तथा कार्यक्रता रोलक्रमका आधारमा आफुले नेतृत्व पाउनु पर्ने दाबि गर्दै चुनावी मैदानमा कस्सिन पनि पछाडी नहट्ने बताउदै आएका छन् । कञ्चनपुरका नौं वटै नगर/गाँउ कमिटिको नेतृत्वका लागि के–कस्ता उम्मेद्वार छन् ?
जनसंख्या र विकास निर्माणका आधारमा जिल्लामै प्रमुख भूमिकामा देखिने भीमदत्त नगर कमिटीका लागि नगर सभापतिको उम्मेद्वारमा दुई बिच कडा प्रतिशर्पधा हुँने आकलन गरिएको छ । २०५० साल देखि सिद्धनाथ विज्ञान क्यापसबाट विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका आशिष खत्री र ०५७ साल देखि रेडियन्ट उच्चमाविको इकाई सभापति हुँदै विद्यार्थी राजनीतिमा अग्रसर भएका अच्युत राज कलौनी भीमदत्तमा नगर सभापतिको दौडमा छन् ।
भीमदत्तको नगर सभापतिका उम्मेद्वार कलौनी र खत्री दुबै जना १८ नं. वडाबाट क्षेत्रिय प्रतिनिधि हुन् । नेता खत्री ०६२/०६३ मा नेपाल विद्यार्थी संघ कञ्चनपुरको कार्यवाहक अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन भने, कलौनी नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सह महामन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
दोधारा–चाँदनीमा नगर कार्यसमितिको चयन सर्वसम्मत बनाउने प्रयत्न भइरहेको कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ का सभापति गोपाल भट्टले बताए । दोधारा चाँदनीमा सभापतिको उम्मेद्वारका लागि नेता राजेन्द्र बहादुर मल्ल र वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष दिल बहादुर सिजाली खुलेका छन् ।
नेता मल्ल र वडाध्यक्ष सिजालीले पनि आफुहरु सहमितिको वातावरण खोजिरहेको बताएका छन् । नेता मल्लले २०५०/०५१ देखि भानु उच्चमावि देखि विद्यार्थी सुरु गरे गरेका हुन् । यद्यपी नेता मल्लले त्यस पछिको केहि समय भने देशको सुरक्षाकर्मीको रुपमा बिताएता पनि उनी पुनः ०६० साल देखि दोधारा चाँदनीमा सक्रिय राजनीतिमा फर्किए । नेता मल्ललाई तत्कालिन दोधारा गाविसको १२ वर्ष तरुण दलको अध्यक्ष भएर काम गरेको अनुभव छ । मल्ल नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनबाट दोधारा–चाँदनीको नगर सचिव निर्वाचित भएका थिए ।
वडाध्यक्ष सिजाली पनि लामो समय देखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा होमिएका व्यक्ति हुन् । २०५९ साल देखि नेपाली कांग्रेसको क्रियासिल सदस्यता लिएर नेता सिजालीले हाल सम्म पार्टीलाई ठुलो योगदान पुर्याएका छन् । नेता सिजाली वडा नं. ६ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्, उनले उक्त निर्वाचनमा तत्कालिन एमाले पार्टीका विद्यार्थी नेता ओम बस्नेतलाई पराजित गरेका थिए ।
बेदकोट नगर कार्यसमितिको नेतृत्व चयनका लागि चुनावी प्रतिशपर्धा हुने देखिएको छ । आज सम्मको राजनैतिक वातावरण हेर्दा बेदकोटमा सभापतिका लागि तीन जना दौडधुपमा छन् ।अहिलेका नगर सभापति पुष्पराज भट्ट, तुलारम शाहु र आफुलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार घोषणा गर्ने भुवन पाण्डेय नगर सभापतिको दौडधुपमा छन् ।
सभापति पुष्पराज भट्ट २०३५/३६ साल देखि विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेको व्यक्ति हुन् । ०३७ सालमा बैजनाथ मावि महेन्द्रनगरमा नेविसंघको ईकाइ सचिव, ०३९ सालमा नेविसंघ कञ्चनपुर सभापति हुँदै ०४२ सालमा तत्कालिन एमालेका नेता उर्वादत्त पन्तलाई पराजित गर्दै स्ववियू सभापति र पुनः ०४५ सालमा स्ववियू सभापति भएको भट्टको दाबि छ ।
सभापति भट्ट २०४५ साल देखि नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा आएका हुन् । उनी ०४२ सालको सत्याग्रहमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा संगै दुई महिना कञ्चनपुर कारागार समेत बसेको बताउछन् ।
शुक्लाफाँटामा नगर सभापतिका लागि अहिलेको राजनैतिक वातावरण अनुसार ४÷५ जना प्रत्यासी रहेको देखिन्छ । शुक्लाफाँटामा निर्वाचनको विकल्प नरहेको नेताहरुको ठहर छ । अहिले सम्म सभापतिका लागि खुलेका मध्ये तेज शाह र दान सिंह बिष्टको नाम चर्चामा रहेको स्थानीय बताउछन् ।
तेज शाह २०४६ साल देखि नेविसंघको राजनीतिबाट अगाडी बढेका व्यक्ति हुन् । २०४८ मा नेविसंघ जिल्ला सदस्य, २०५० सालमा नेपाली कांग्रेसको क्रियासिल सदस्य, ०५४ मा तत्कालिन झलारी–७ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित, ०५६ मा तरुण दलको संस्थापक जिल्ला सदस्य, ०५९ मा तरुण दलको जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेको उनको दाबि छ । ०६२/०६३ को जन आन्दोलनमा केहि दिन राजनीतिक हिरासतमा समेत रहेका शाह हाल सम्म नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रुपमा लागेका छन् ।
त्यसैगरी नगर सभापतिका अर्का प्रत्यासी दान सिंह ऐर ०४६/०४७ देखि नेवि संघको गाउँ इकाई कमिटीबाट राजनीति सुरु गरेको बताउछन् । ०४९ देखि ०५४ सम्म निर्वाचित गाविसको सल्लाहकार हुँदै विद्यालयहरुको व्यवस्थापन समिति सम्हालेको अनुभव आफु संग भएको उनको दाबि छ ।
कृष्णपुरमा नगर सभापतिकाका प्रत्यासी तीन जना रहेका छन् । प्रत्यासी तीन जना रहेपनि सर्वसम्मतै नगर कार्यसमिति गठन हुने नगर सभापति भक्त बहादुर खत्री बताउछन् ।
सभापतिका प्रत्यासी बिष्णु सिंह खड्का, पुष्पराज भट्ट र कासी राम भाट रहेको जनाइएको छ । तीनै जना सभापतिका प्रत्यासी सहमतिको बाटो खोजी रहेको बताइएको छ ।